WatchOS 7.1 beta 4 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
WatchOS 7.1 beta 4 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira
Mazuva mashoma apfuura, Apple yakaburitsa yakasarudzika yekuvandudza yeApple Watch Series 3, chishandiso icho iyo yekuvandudza kune watchOS 7 haisi kuita nemazvo zvachose, iyo yakagadzirisa matambudziko ekumisikidza andakatambura. Mazuva mashoma gare gare, Apple yakaburitsa iyo yechina beta yewatchOS 7.1.
watchOS 7.1 ichave iyo yekutanga hombe kuvandudza iyo Apple Watch inogamuchira, vhezheni irimo parizvino mubeta rechina asi iyo kusiyana nemabheja apfuura, yakaburitswa mumaviri anovaka akasiyana: 18R5585a uye 18R5586a.
Pari zvino Hatizive kuti nei Apple yaita danho iri, saka isu tichafanirwa kumirira mamwe maawa mashoma kuti tione zvikonzero izvo zvakatungamira vakomana kubva kuCupertino kuti vatore danho iri. Icho chikonzero chingangoenderana neiyo watchOS 7.0.3 yekuvandudza iyo kambani yakaburitsa chete yeiyo Series 3, asi ichiri fungidziro.
Parizvino iyi nyowani nyowani inotarisa pa kunatsiridza kuita kwechigadzirwa. Nekudaro, iyo yazvino beta yeiyo iOS 14.2 ichawedzera kuvandudza senge nyowani emojis uye shanduko kune iyo AirPlay interface yeDhivhareji Center.
Kana iwe uri mushandisi weiyo Apple Watch yeruzhinji beta chirongwa, ichave iri nyaya yemazuva pamberi peiyi nyowani beta zvakare svika ichi chiteshi chekugovera, kunyangwe kubva kwandiri ndichibva kuMac hatikurudzire kuti uiise, nekuti kana zvikakundikana, tichazopera Apple Watch kwemazuva mashoma kubvira patichazofanira kuitumira kuApple technical service.
Kana iwe uri mugadziri, iyi nyowani yekuvandudza inowanikwa kuburikidza neApple Watch application pane yako iPhone, mukati General> Software kugadzirisa. Parizvino, hatizive kana iyo dambudziko rakataurwa kune vamwe vashandisi vanobva kuSouth Korea, inoenderana neApple Watch SE inogadziriswa neiyi nyowani beta, kunyange zvese zvichiratidza kuti zvinokonzerwa nedambudziko rebatch irori kwete dambudziko re software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » WatchOS 7.1 beta 4 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira
Safari Technology Preview 115 yave kuwanikwa
Ini handiwani yakaderera bhatiri yambiro paMacBook yangu